Ny etika - Quanzhou Omi Apparel Co., Ltd.
Ny fomba fanao etika
Ao amin'ny OMI, izahay dia manolo-tena amin'ny fampiharana ara-barotra marina etika hisorohana ny fanararaotana ataon'ny mpiasa na ny harena voajanahary amin'ny famokarana akanjo.
Mino izahay fa ny mpiasa sambatra dia mitovy amin'ny akanjo vita tsara kokoa noho ny mpiasa mazoto kokoa hanao asa tsara raha miasa amin'ny fomba fanao tsara sy amin'ny tontolo iainana mahomby.
Orinasa sy toera-miasa
Ny orinasantsika dia tsy mampiasa mpiasa latsaky ny 16 taona ary manome karama farafahakeliny farafahakeliny ho karama fototra ara-potoana.
Ny orinasan-tsika dia tsy manana fomba fanao amin'ny asa an-tery, izay midika fa tsy misy olona terena hiasa mihoatra ny faniriany ary raha miasa mihoatra ny ora izy ireo dia misy tambin-karama fanampiny.
Ireo fotodrafitrasa dia misy fitaovana fanilo sy fidiovana araka ny tokony ho izy ary azo antoka ny fepetra sy ny fiasa ary ny fitaovana mba hisorohana ny ratra vokatry ny asa. Ohatra iray dia ny tsy fisian'ny tariby / socket elektrika miharihary, misy toerana malalaka eo anelanelan'ny toeram-piasana, fitaovana azo antoka toy ny vy-harato sy fonon-tànana ary facemask no ampiasaina.
Fomba fanao biolojika
Miara-miasa amin'ny milina fanaovana lamba koa izahay Nahazo mari-pahaizana GOTS & OEKO-TEX 100 voamarina izay nosedraina fa azo antoka amin'ny fampiasana ny olombelona sy ny fampiasana ny fomba famokarana biolojika.
Ny orinasanay koa dia nandalo ny BSCI fanamarinana, Omeo mpanjifa vokatra azo antoka kokoa.